Trainz Driver v1.0.1 for Android – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | Apple Section (iOS)
Folder Organizer v3.6.6 APK ( 2.85MB) မိုဘိုင်းအရောင်းအ၀ယ် : ၁၅၀၀ တန် CDMA 800 SIM Card ရောင်းမည်။ မိုဘိုင်းအရောင်းအ၀ယ် : CDMA 800 လိုင်းကဒ်ရောင်းမည် မိုဘိုင်းအရောင်းအ၀ယ် : Huawei U8951 ရောင်းမည် မိုဘိုင်းအရောင်းအ၀ယ် : CDMA 800 လိုင်းကဒ်ရောင်းမည် Home
Published On: Sun, Aug 26th, 2012 Android OS game များ | By သက်နိုင်စိုး Trainz Driver v1.0.1 for Android
ရထားမောင်းတဲ့ဂိမ်းလေးပါ။ သင့်ကို ရထားတစ်စင်းကို ဘယ်လိုမောင်းနှင်၇မယ်ဆိုတာဒီဂိမ်းလေးကသင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဂိမ်းရဲ့ graphic ကလည်း 3D graphic နဲ့ဖြစ်လို့ဆော့ရတာတော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ဒီဂိမ်းလေးကို Google Play မှာ ၀.၉၉ ဒေါ်လာနဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီး မြန်မာ Mobile Application Store မှာတော့ freedownload ရယူနိုင်ပါတယ်။
Trainz Driver v1.0.1 for Android အားရယူရန်
ဂိမ်း cache data ဖိုင်များကို အောက်ကလင့်များမှာရယူပါ။
Tranz Driver Data Part 1 အားရယူရန်
Tranz Driver Data Part2အားရယူရန်
cache data part ဖိုင်နှစ်ခုကို Win Rar နဲ့ extract လုပ်လိုက်ရင် com.n3vgames.android.driver ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဖိုင်တစ်ခုရလာပါမယ်။
– apk ဖိုင်လေးကိုအရင်သွင်းပါ။
– ခုနက Extract လုပ်လို့ရလာတဲ့ဖိုင် “com.n3vgames.android.driver” ကို ဖုန်း SD Card ရဲ့ Android/obb ဖိုဒါအောက်မှာထည့်ပါ။ (Android ဖိုင်အောက်မှာobb ဖိုဒါမရှိသေးရင် ကိုယ့်ဘာသာဆောက်လိုက်ပါ)
5 comments on “Trainz Driver v1.0.1 for Android”	mgmgyoe on November 13, 2012 at 11:38 pm said:
အကိုရေ data file က down လို့မရဘူး။ File does not exist on this server ဖြစ်နေတယ် ကူပါဦး
Reply ↓	arsharphyo on November 22, 2012 at 1:43 pm said:
MMAP ကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ် ..နောက်ထပ်လည်း အများကြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ပါစေ …လို. …
Reply ↓	arsharphyo on November 22, 2012 at 1:44 pm said:
Ghostcall app လေးကို ပြန်ပြီး လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ် ..ဘယ်လိုမှ download လုပ်လို.မရလို.ပါဗျာ ….
Reply ↓	NaungOo on November 26, 2012 at 2:10 am said:
file does not exist ဖြစ်နေလို့ data downလို့ မရဘူးဖြစ်နေပါတယ် ကူညီပေးပါဦး အကိုရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျာ
Reply ↓	Tom on December 10, 2012 at 2:04 pm said:
Data Files တွေ down လို့မရဘူး
Ko Htet on Mobile Reviews: Huawei Ascend P2Ko Thu on Huawei C8813 အတွက် Samsung Galaxy S4 ROMkotun on Samsung galaxy S3(GTI9300) သမားများအတွက် 4.2.2 official jellybean leaked firmware ထွက်ရှိလာပါပြီ..kools on FL Studio Mobile v1.0.1 Apk(Patched)+OBB-(123Mb)Aung Myo Kyaw on Samsung Ace Plus S7500 ကို Root လုပ်မယ်… Android Development